काजीले पाउँछन् त मैया ? | Ratopati
काजीले पाउँछन् त मैया ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeभदौ ३१, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौं– ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ आगामी शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म हो । ‘कबड्डी’को दोस्रो सिक्वेलको रुपमा यो फिल्म निर्माण भएको हो । यस अगाडि पहिलो सिक्वेलको रुपमा ‘कबड्डी कबड्डी’ प्रदर्शनमा आएको । ‘कबड्डी’ भन्दा ‘कबड्डी कबड्डी’ केही परिस्कृत र थप कलाकारको साथमा आएको थियो । यो दोस्रो सिक्वेल त झनै धेरै कलाकारका साथ निर्माण भएको छ ।
‘कबड्डी’ र त्यसपछि बनेको सिक्वेलको कथा काजी पात्रले आफ्नो सोल्टिनी मैया पाउन गरेको संघर्षमा थियो । दोस्रो सिक्वेलमा पनि त्यही कथाले निरन्तरता पाएको निर्देशक रामबाबु गुरुङले बताए । तेस्रो सिक्वेलमा आएर काजीले मैया पाउछन् त ? निर्देशक रामबाबु गुरुङलाई सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटको क्रममा प्रश्न राखिएको थियो । ‘त्यही प्रश्नको उतर हो कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ गुरुङले छोटो उत्तर दिए ।
निर्देशक गुरुङले फिल्मको कथा तेस्रो सिक्वेलमा पनि नटुङ्गिएको बताए । भने ‘चौंथो सिक्वेल कबड्डीको अन्तिम सिरिज हुनेछ ।’ ‘हुन त दोस्रो सिक्वेललाई नै अन्तिम बनाउने सोच थियो’ उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा तेस्रो पनि बन्यो ।’ अहिले चौथोका सबै कथा टुङ्याउने योजना रहेको उनले सुनाए ।
कबड्डीको तेस्रो सिक्वेलमा आएर कलाकार विल्सविक्रम राई पनि जोडिएका छन् । त्यो पनि दयाहाङले निर्वाह गरेको काजीको समानान्तर भूमिका बमकाजीको रुपमा । यो अर्थमा उनलाई भिलेन पनि भन्न सकिन्छ । विल्सनले भने फिल्ममा भिलेन र हिरो भन्दा पनि काजीलाई टक्कर दिने पात्रको रुपमा देखिएको जानकारी दिए । उनले कबड्डीको दोस्रा सिक्वेल अभिनय गर्दा धेरै कुरा सिकेको बताए ।
यो फिल्ममा क्याप्टेन अभिनेत्री उपासनासिंह ठकुरी पनि भित्रिएकी छन् । ठकुरीले फिल्म आफ्नो जीवनको टनिङ प्वाइन्ट हुने बताइन् । दयाहाङ, उपासना, कर्मा, विल्सनको अलवा विजय बराल, माओत्से गुरुङ, रिश्मा गुरुङ, वुद्दि तामाङ, पुष्कर गुरुङ लगायतका कलाकारको फिल्ममा अभिनय देख्न सकिन्छ ।
#कबड्डी कबड्डी कबड्डी
सुनितामी परियारको तीज गीत सार्वजनिक
चितवनमा लकडाउनका अवधिमा १२५ मुद्दा फैसला
नेकपा विवादको ‘साइड इफेक्ट’: पार्टी कार्यालयमा नारावाजी र धर्ना (फोटो र भिडियोमा हेर्नुुस्)
‘दुई पुरेतका लड्डू कथा !’
गण्डकीमा १७ नयाँ संक्रमित थपिए, कूल संक्रमित संख्या ११ सय नाघ्यो
आजबाट एकतर्फी रुपमा खुल्यो रसुवागढी नाका, आयातमा नेपालले चिनियाँ सर्त मान्नुपर्ने
सूर्योदयको देशः जापान
काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका ए डिभिजन क्लबलाई प्रति क्लब रु १० लाख सहयोग
वृद्धग्राम बन्ने भो देवघाटमा
फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली पुलिस स्टेशनमा, दुई फिल्मबाट सुशान्तलाई निकालेको आरोप
अझै घटेन कोरोना परीक्षण गराउनेको भीड